TINCTURE OF TUFAAX ON VODKA: CUNTO KARINTA EE GURIGA LAGU KARIYO SAWIRO IYO FIIDIYOO - TUFAAX
Sida loo sameeyo tincture tufaaxa vodka (on khamriga)
Qof kastaa wuxuu maqlay waxtarka aan la garanayn ee tufaaxa jirka jirka, taas oo aan lagu sheegi karin khamriga adag. Inkasta oo inta badan badi diidmada oo dhan isaga ku xidhan tahay xadgudubyo badan oo tayo iyo tayada, si kastaba ha ahaatee, sumcadda xun ee khamriga ayaa ka badan erayo naxariis leh oo ku saabsan isaga. Hase yeeshee, haddii aad tufaaxa ku dareysid tufaaxa tufaaxa ee vodka, markaa waxaan helaynaa cabitaan weyn oo ah soo saaraha, kaas oo nuugay dhammaan tayada ugu fiican ee tufaaxa iyo waxtar, taas oo weli ku jirta khamriga. Tincture tufaax la yaab leh ayaa caan ku ah quruumaha kala duwan in kabadan hal qarni.
Qodobo waxtar leh oo tincture ah
Ku dhowaad dhammaan nafaqooyinka caafimaadka ee bani-aadmiga, kuwaas oo ku badan tufaax, u rogaan tincture. Iyo walxahan qiimaha leh, runtii, aad u badan.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sida loo xafido tufaax iyo sida loo diyaariyo xilliga jiilaalka.
Tusaale ahaan, tufaaxa waxaa ku jira 11 nooc oo fiitamiin ah, iyo 28 macro iyo nafaqo yaryar, oo ay ka mid tahay jiritaanka birta iyo potassium gaar ahaan caan. Sidoo kale miro badani waa pectins badan, asiidh dufan ah oo aan fiicnayn, monosaccharides, fareeshka, fiyuusta cuntada, malic, tartarik iyo citric acids. Dhamaan hantidan, oo u rogaya cabitaan, waxay muujinaysaa:
hagaajinta hawsha muruqyada wadnaha;
Hagaajinta nidaamka dareemayaasha;
caadeysiga hababka dheef-shiid kiimikaad;
xoojinta derbiyada xididdada dhiigga;
ka saarista sunta, birta culus iyo jeexjeexyada jirka;
hagaajinta rabitaanka cuntada;
Faa'iidooyinka jidhka waxaa lagu dhejiyaa tincture tufaax leh oo farxad u leh nafta oo ay sabab u tahay dhadhanka dhadhanka iyo guryaha kor u qaadaya. Cabitaankani sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa jikada, isagoo si guul leh u beddelaya suufka cateriga ah.
Ma taqaanaa? Dhirta Apple waxaa loo tixgeliyaa geedkii ugu horreeyay ee lagu beeray: dadku waxay ku raaxeeyeen midhihiisa in ka badan siddeed kun oo sano.
Sida loo doorto tufaaxa
Si aad u diyaarisid tufaax tufaax wanaagsan leh, waxaad u baahan tahay inaad doorato tufaax wanaagsan iyo khamri wanaagsan. Sida tufaaxa, Dhaqan ahaan noocyada kala duwan waxay ku haboon yihiin in la cabbo cabitaan, haddii midhaha ay ka madax bannaanaan kallana, dhaawac iyo gooryaan.
Inkasta oo midabyo kasta oo caafimaad iyo caafimaad leh ay ku habboon yihiin sameynta tinctures hal dhinac ama mid kale, waxaa jira weli noocyo badanaa loo isticmaalo in lagu cabo. Kuwani waa noocyo goor dambe ah. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah "White Pouring", "Antonovka", "Pepin", "Grushevka", "Saffron", "Ranet" iyo "Calvil". Fasalka White buuxinta
Waxaa la aaminsan yahay in diyaarinta cabitaanka ugu doorbidaa tufaax maqaarka cas. Si kastaba ha ahaatee, khubarada ayaa sheegaya in midabka midhaha uusan saameyn ku yeelanaynin tayada tincture oo kaliya oo muujinaysa dhibka shakhsiyadeed ee qofka ama qofka.
Laakiin waxay cayaaraysaa dhadhan maskaxeed oo culus. Oo waxaa si gaar ah la xidhiidha tufaax adag oo kala duwan. Midhaha xilliga kuleylka ah maaha kuwo udubdhexaad ah, dabcan, waxay saamaynaysaa tayada cabitaanka. Laakiin macaan miro ah ma aha mid xushmeynaya, liddi ku ah, sida ay khabiiro u yihiin, noocyo cagaarka ah ayaa ku siin kara badeecada si fudud oo asal ah oo asal ah.
Sida loo sameeyo tincture of tufaax
Mid ka mid ah cuntooyinka tincture caan ah loo yaqaan "Apple".
Calaamadee suugaanta si aad u sameysid dayax gacmeed oo guriga lagu dhajiyo.
Si aad u diyaariso cabitaankaan, waxaad u baahan tahay:
diirka tufaaxa - 100 garaam;
vodka - 0.5 litir;
cows qalalan - 2 garaam;
balsa la qalajiyey - 2 garaam;
sonkorta lagu dubay - 1 qaado shaah;
Galmada qallalan - 0.5 tsp.
Iyada oo miro si fiican loo maydho, ka jar jarjar oo ku rid weel quraarad leh naaso la qalajiyey iyo beeyo liin.
Sidoo kale waa inay ku shubaan nus litir oo vodka ah, ka dib markii weelka la xiro si adag loo xiro dabool leh oo la dhigo meel mugdi ah laba asbuuc.
Markaas tincture keentay u baahan tahay in la sifeeyo oo ku dar shaaha oo sonkor ah iyo badh koob shandad ah.
Cabitaanku waa inuu istaagaa meel mugdi ah maalmo badan ilaa sonkorta si dhammaystiran loo kala diro.
Hadda tincture diyaar u ah inuu isticmaalo. Waxay leedahay caraf udgoon, jilicsan iyo dhadhan qoto dheer.
Ma taqaanaa? Muga kasta ee tufaaxa quarter-kiisa wuxuu ka kooban yahay hawo, sidaas awgeed mirahaas kuma boodaan biyaha.
Video: Sida loo sameeyo tincture tufaax
Taariikh dheer, badeecadani waxay ururisay cuntooyin badan oo loogu talagalay diyaarinta. Waxaa ka mid ah - cabitaanka xoogga leh ee ragga iyo jilibka - haweenka, si khaas ah loo kariyo tufaaxa ama diirkooda, iyo sidoo kale iyada oo lagu daro alaabo kale duwan. Cunnooyinka ayaa kala duwanaan kara nooca khamriga, oo inta badan wakiil ka ah vodka, moonshine wanaagsan, sheyga ama bourbon.
Tincture xoog leh ee ragga
Si aad u diyaariso cabitaanka labka ah, waxaad u baahan tahay waxyaabaha soo socda:
tufaaxa - 1 kilo;
vodka - 1 litir;
vanillin - 3 garaam;
Geedka qoriinku waa nus dhan.
Diyaarinta tincture sidaas:
Miraha nadiifka ah waa in laga takhalusaa dhammaan xad-dhaafka ee qaabka asaasiga ah, abuurka iyo qaybo waxyeello, ka dibna googooyo gogo 'yar.
Dalagyadaas, oo ay weheliyaan basbeelka iyo qorfe, waa in lagu rakibaa weel dhalada ka dibna ku shubaa vodka, ka dibna weelku waa inuu si taxadar leh loo xiraa oo ku tagaa meel madow iyo meel diiran toban maalmood.
Ka dib markii lagu xareeyo shinecloth, sheyga ayaa diyaar u ah isticmaalka.
Recipe leh caleemaha currant madow
Wixii tincture this tufaax this leh dheeriga ah ee caleemaha currant madow, waxaad isticmaali kartaa vodka, khamriga iyo dayax-tayo wanaagsan.
Baro sida loo qalajiyo, dukaanka iyo waxa loo isticmaalo caleemaha currant.
vodka, khamriga ama moonshine - 1.5 litir;
sonkorta ama sonkorta lagu darey - 3 qaado;
caleemaha madow - 20 gogo '.
Miraha nadiifka ah waa in laga saaraa asaasiga iyo jarjar xaleef yar yar, taas oo lagu dhejiyo weel dhalaalaya saddex litir oo leh caleemo currant iyo malab.
Kuwan oo dhan waa in lagu daadiyaa khamriga. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad xirto weelka daboolka oo ku rid meel gudcur leh oo qabow bil kasta iyo badh.
Waqtigaas ka dib, cabitaanka waa in la xoqo faashad oo u diyaari toddobaad kale.
Waa muhiim! Ka dib markii la soo saaro, nooc kasta oo tincture tufaaxa waa in la siiyaa ugu yaraan hal wiig in uu ku adkeysto. Waxay kobcisaa dhadhanka cabitaanka iyo carafka.
Tincture of tufaax qalajiyey
Ogow wixii tufaax ah ee la qalajiyey ee jidhka.
Waxay ku adkaysataa vodka ama boqolkiiba 50 khamriga.
tufaaxa qalajiyey - 2 muraayad;
Boqolkiiba 50 khamriga ama vodka - 0.5 litir;
ginger-qaabka qaabka xidid la xoqay - 2 qaado;
sabiibka - 2 qaado;
malab - 2 tsp.
Tufaaxyada la qalajiyey ee xididada xididdada iyo sabiibta waa in lagu dhejiyaa weel dherer ah, kaas oo markaa lagu daro aalkolada.
Baro naftaada iyo isticmaalka noocyada kala duwan ee malab.
Taas ka dib, saxan si adag u xiran waa in laga tagaa ilaa laba bilood, ka dibna faleebo waa in la sifeeyaa, oo lagu daraa malab, mar kale u soo dir laba jeer isbuuc si loo qaboojiyo.
Kaydinta saxda ah ee cabitaanka
Cabbitaanka vodka iyo cabitaanada kale ee khamriga ah waxaa lagu hayaa qabow iyo madow ilaa hal sano iyo badh iyadoon lumin dhadhanka iyo tayada caafimaad leh.
U adeegista miiska: waxa leh iyo sida loo cabbo tincture
Tincture Apple waxaa laga adeegaa miiska ama dukumeentiga ama dhalada oo si fiican u isku dhafan leh dhamaan noocyada suxuunta, oo ka bilaabma hilibka iyo soo afjarida macmacaanka. Waxaa loo isticmaalaa labadaba qaabka saafiga ah iyo qayb ka mid ah qaybaha cocktails, taas oo u bixisa dhadhanka iyo dhadhanka macaan. Hase yeeshe, inkastoo ay tayadoodu sarrayso, tincture weli waa cabitaan khamriga xooggan, sidaas darteed waa ka mamnuuc in la isticmaalo carruurta, haweenka uurka leh iyo dadka qaba daawooyinka khatarta ah ee qaabka khamriga, boogta peptic iyo cudurada la midka ah.
Waa muhiim! Sida xaaladaha kale ee cabitaanka khamriga oo kale, oo leh tincture tufaax, isla tallaabooyin taxaddir ah ayaa lagama maarmaan ah: waa in la cunaa qadar aad u dhexdhexaad ah, iyada oo aan ka badnayn qiyaasta daawada asalka ah ee khamriga.
Cabitaanka, tijaabiyey jiilalka dad badan oo adduunka ah oo dhan, ayaa noqday mid aad u caansan maanta. Ka hor inta badan khamriga khamriga ee ay bixiso ganacsiga maanta, tincture apple u taagan yahay dhadhankiisa, caraf udgoon, faa'iidooyinka caafimaad, fududeyn soo saarista iyo qiimaha hooseeyo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Tufaax 2019